महरा रिहा भएपछि रोशनीले भनिन्, ‘हामी दुबैले न्याय पायौँ’ | Ratopati
महरा रिहा भएपछि रोशनीले भनिन्, ‘हामी दुबैले न्याय पायौँ’
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeफागुन ५, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौं । संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार प्रयासको मुद्दामा महरालाई सफाइ दिएपछि शाहीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।
शाहीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा महरा १९ असोजमा पक्राउ परेका थिए ।
उनले भनिन्, ‘महरा सरकारले न्याय पाउनुभएको छ । मैले पनि न्याय पाएकी छु । अदालतको फैसलाबाट दुःख दिन खोज्नेहरु पराजित भएका छन् ।’
महराले आफूलाई बलात्कार प्रयास भन्दै उनी मिडियामा आएकी थिइन् । तर पछि उनले बयान फेर्दै आएकी थिइन् ।
Feb. 18, 2020, 7:39 a.m. सन्देश शर्मा
पद, पैसा या प्रलोभनमा यौन कार्यमा सरिक हुनु बेश्याबृत्ति मानिन्छ । msir काण्डले सरकारी पोर्नस्टारहरुको अनुहार उदांगों बनायो, बेशरमहरू। सरकार रोशनीलाई राजदूत बनाएर पठाउदा हुन्छ । न्याय हराएको देश, कठैबरा । गृहमंत्री, बन मन्त्री का स्वकीय सचिबकि श्रीमतीलाई कसले बलात्कार गर्ला??? msir लाई झुटा आरोप लगाउने रोशनी नानीलाई के कारबाही हुन्छ?? बरु अर्चना पनेरूसँग मिलेर रोशनीले ५-७ फ़िल्म बनाए जगतको कल्याण हुनेथियो ।
प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता, देउवासँग पनि छलफल